Booliiska oo dib u baaraya Falastini London lagu dilay 1987 - BBC News Somali
Image caption Naji Salim Hussain Al-Ali
Booliiska Britain ayaa soddon sano ka dib, dib u billaabaya baaritaan ku saabsan dil loo gaystay farshaxaniiste reer Falastiin ah oo London dhex marayay.
Naji Salim Hussain Al-Ali, oo arrimaha siyaasadda farshaxan ahaan ugu soo bandhigi jiray wargays Kuwayt laga leeyahay Al-Qabas, ayaa luqunta laga toogtay isaga oo ku sii socda xafiiskiisa oo London ku yaalay.
Markii uu weerarkaasi dhacay 22 July 1987 waxaa loola cararay isbitaal, balse wuxuu geeriyooday bil ka dib.
Taliyaha argagixiso la dagaalanka ayaa raadinaya xog ku saabsan ninkii qoriga watay iyo nin la arkay isaga oo baabuur ku wada meeshii uu dhibku ka dhacay.
Al-Ali oo samayn jiray sawirro shactiro ah ayaa mararka qaar loo arki jiray in uu ka soo horjeeday xukuumaddii Falastiin, sannadihii dilkiisa ka horreeyayna marar badan ayaa hanjabaadyo dil ah loo soo diray, sida ay booliisku sheegeen.
Dhabarkaa laga soo toogtay
Markii uu dhintay dadka bariga dhexe ka faalooda waxay si joogto ah u sheegi jireen in lagu dilay qorshe uu watay dhaqdhaqaaqii PLO oo la rabay in lagu aamusiiyo dadka ka soo horjeeda ee ku sugan Yurub iyo Bariga Dhexe, laakiin PLO way diiday arrintaas.
Arday Falastiini ah ayaa lagu xiray Hull, intii baaritaanka lagu hayayna wuxuu sheegay in uu u shaqaynayay PLO iyo sirdoonka Israa'iil ee Mossad loo yaqaanno, xabsiga ayaana la dhigay maadaama oo lagu arkay hub iyo waxyaabo qarxa.
Image caption Farshaxan ahaan qofka la tuhunsan yahay in uu sidan u eg yahay maanta ayaa laga yaabaa
Askari reer Isra'iil oo lagu xukumay dilka nin Falastiin ah
Xamaas oo sheegtay inay dooneyso dowlad ku meelgaar ah
Inta aan la tooganin ka hor Al-Ali ayaa gaarigiisa dhigtay Ixworth Place, ka hor inta uusan billaabin in uu u lugeeyo wadada Draycott Avenue.
Dad goobjoogeyaal ahaa ayaa sheegay in ay arkeen nin hubaysan oo dabo socday markii dambana toogtay.
Waxay ku tilmaameen in uu ahaa nin ilaa 25 jir ah oo u eg dadka Bariga Dhexe ka soo jeeda.